प्रकाशित मिति : शुक्र, चैत्र १५, २०७५
नेपालमा बोलिने सबै राष्ट्र भाषाहरूमा लेखिएको साहित्य नेपाली साहित्य हुन् । ५४/५५ सालदेखि नै हामीले नेपालका सबै भाषा समृद्धिका लागि अभियान चलाउँदै आएका छौं । तामाङ र मगरमा काम भइरहेको छ । कति काम भइसकेको छ ।
पदको भागबण्डामा उहाँहरूको गुनासो थियो क्यारे ?
प्रलेस वामपन्थी लेखक साहित्यकारको साझा मोर्चा भन्ने थाहा छ । तर, सबै खाल्का विचारहरुलाई प्रलेसले समेट्छ भनेको के हो ?
सामान्तवाद विरुद्ध साँस्कृतिक आन्दोलन होस् अथवा साम्राज्यवाद विरुद्धको आन्दोलन होस् । नेपालको हरेक परिवर्तनको अगुवाई प्रलेसले नै गर्दे आएको छ । लोकतान्त्रिक स्रस्टाहरूको संयुक्त मञ्चको अध्यक्ष वैराँगी काइला हुनुहुन्थ्यो । यसमा आनन्ददेव भट्टलगायतका प्रगतिवादी साहित्यकारहरुको बलियो सहभागिता थियो । नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि वैचारिक नेतृत्व प्रलेसले गरेको थियो । धर्मनिरपोक्ष, गणतन्त्रका पक्षमा प्रलेसले नै आवाज उठाएको हो । हामीले जनवादी सँस्कृति साहित्यको प्रचार गर्नु त छदैछ । अहिले पनि सामन्तवादी सँस्कृतिसँग लडिरहनुपरेको छ । राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरु अझै छन् । साँस्कृतिक भूमण्डलीकरणको हावी त्यतिकै छ । साम्राज्यवादी सँस्कृति स्थापना गर्न ठुलठुला शक्तिहरु लागिरहेका छन् । प्रलेसका जिम्मेवार व्यक्तिहरु उनीहरुको साहित्यिक सम्मेलनमा पुगेर बोल्छन् । जानीनजानी साथीहरू फसिरहेका छन् । प्रलेस खत्तम भयो भन्नेहरु नै त्यहाँ देखिन्छ ।
प्रलेसले गर्ने काम नै वैचारिक र सिर्जनात्मक हो ।
www.ehulaki.com बाट साभार
विदेशीको सीमा रुँघ्न छोड नेपाली !